Soo dejisan GnuCash 4.1 – Vessoft
WindowsKuwa kaleSoftware softwareGnuCash
Bogga rasmiga ah: GnuCash
GnuCash – maamulaha maaliyadeed oo badan si loola socdo socodkaaga lacagta. Barnaamijkani waa mid aad u wanaagsan shakhsiyaadka gaarka ah iyo ganacsiyada yaryar si ay u heystaan ​​diiwaanada dakhliga iyo kharashyada, hantida iyo deymaha, macaamilada, dakhliga maalgelinta, bixinta amaahda, iwm. Markaad sameysid xisaab, GnuCash waxay bixisaa lacag doorasho, qor macluumaadka ku saabsan shirkaddaada oo tilmaama nooca xisaabta kaas oo ugu dambeeyntii abuuri doona nidaam xisaabeed oo heer sare ah. Software wuxuu ka kooban yahay module ah si loo dhiso garaafyada xogta maaliyadeed ee isticmaalaha foomka jaantusyada kala duwan waxayna taageertaa qadarka xisaabeed ee dhamaystiran oo loo habeyn karo si loogu daro baahiyahaaga shakhsi ahaaneed. GnuCash waxay kuu ogolaaneysaa inaad fuliso qaliinka kala duwan ee macaamilada, oo ay ku jiraan macaamilada jadwalka ah ee lagu qorsheynayo tifaftire gaar ah. Sidoo kale, GnuCash waxay awood u leedahay inay soo dejiso xogta nidaamyada kale ee maaliyadeed, sida QIF iyo OFX.
Dhismaha garaafyada iyo warbixinnada
Qeybinta dakhliga iyo kharashyada qaybaha
La shaqee sanduuqyada saamiyada
Soo dejisan GnuCash
Faallo ku saabsan GnuCash
GnuCash Xirfadaha la xiriira